whuk-46651 – Page 257 – WunYan
ဘတ်၂၄ သန်းကံထူးသွားတဲ့ လာအိုနိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူ ကံထူးရှင်စုံတွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ ချိုင်နာ့ခရိုင်က ဟန်နမ်းစာခေါ ရဲစခန်းမှာ လာအိုနိုင်ငံသား နိုင်နွဲဖလုမ်စောန် နဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူတို့ဟာ ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ မှာဖွင့်တဲ့ ထိုင်းထီဆုကြီး ပေါက်ဂဏန်း ၅၃၃၇၂၆ ကို လက်မှတ်၎စောင်ပေါက်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနေရဲစခန်းကို လာရောက်အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး မှတ်တမ်း လာတင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ် ၄ စောင်အတွက် ရရှိမယ့် ဆုငွေ စုစုပေါင်းဟာ ထိုင်းငွေ ဘတ်၂၄သန်း…
ကျွန်တော်ပိုင် ၈၈၈၁ ကားတိုင်းတွင် ရာသက်ပန်အခမဲ့ စီးနင်းခွင့်ရသူလေး (သို့) အဆင့်မြင့် ရာဇာထွန်းကားပေါ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကလေးမွေးဖွားခြင်း
ကျွန်တော်ပိုင် ၈၈၈၁ ကားတိုင်းတွင် ရာသက်ပန်အခမဲ့ စီးနင်းခွင့်ရသူလေး (သို့) အဆင့်မြင့် ရာဇာထွန်းကားပေါ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကလေးမွေးဖွားခြင်း (၁.၁၁.၂၀၁၇) ကျွန်တော်ပိုင် 7K/8881 / လာရှိုး-ရန်ကုန် (1Bus) ရာဇာထွန်းကားပေါ်မှာ ခရီးသွားရင်း ဗုဒ္ဓဟူး သမီးကလေး မဝင်းရာဇာပိုင်အား မွန်းလွဲ ၄နာရီ ၃၀ မိနစ် အရောက် ကျောက်မဲနှင့် သီပေါ ကြား ကုန်းသာရွာအနီးနား ကားပေါ်မှာတင် အောင်မြင်စွာ…
အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် ထိုင်းအမျိုးသမီးကြီး ချစ်သူအလိုရှိကြောင်း ကြော်ငြာ
ထိုင်းနိုင်ငံ အူဘွန် ရာချဋ္ဌာနီ ပြည်နယ်က အသက် ၆၅နှစ် အရွယ် ဆွန်ပေါင် ချွန်ဖူပရာဖက် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတဦးဟာ ချစ်သူအလိုရှိကြောင်း နေအိမ်အပေါက်မှာ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ဆွဲကာ ကြော်ငြာ ထားတယ်လို့ The Naiton သတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ သူမဟာ အရင်ဂျာမန်လူမျိုးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကွာရှင်းပြီးနောက် အထီးကျန်ဖြစ် လာတာကြောင့် အငြိမ်းစားအရွယ် ချစ်သူတဦး အလိုရှိတယ်လို့ ကြော်ငြာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာတော့ “အသက်…
Posted on November 1, 2017 by whuk-46651
လာဒ်တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်းမကောင်းသူများ ၊ အကြွေးမရသူများ ၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ်အကိုင် တို့လို တန်းလန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင်လိုသူများ အတွက်အလွန်တရာမှ လာဒ်ရွှင်စေသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဂါထာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကိုယ်တွေ့တစ်ခု ပြောပါရစေ… 2012.12.31 နေ့မှာ ငွေ ၆ သိန်း…
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မြန်မာလူငယ်တစ်ဦး လေယာဉ်ပျံ တီထွင်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန် ကြိုးပမ်းနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့တောင်ဘက် ကျွန်းကြီးရွာက အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် လူငယ်တဦးဟာ လေယာဉ်ပျံကိုယ်တိုင်တီထွင်ပြီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခွင့်ရဖို့ မြို့နယ်ထွေအုပ်ကို စာတင်ထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုမိန့်ရမှ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့်ရရင်တော့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလေယာဉ်ကို တီထွင်သူဟာ လက်သမားအလုပ်လုပ်တဲ့ ကျွန်းကြီးရွာသား ကိုကျော်ဇင်ဝင်းဆိုသူဖြစ်ပြီး အချိန် ၇ လလုံး ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဒီလေယာဉ်ကိုပဲလုပ်နေတာလို့ ကျွန်းကြီးရွာက ဦးကျောက်ခဲက ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။ “အခုလို တီထွင်နိုင်တဲ့ အပေါ်ရွာသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိတယ်။…
ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော အပြုအမူများ မိသားစုနားထောင်ရန်မသင့်လျော်သော ရိုင်းစိုင်းသည့် စကားအသုံးအနှုန်းများ ဖောဖောသီသီပါဝင်သည့် ” ညစ်ညမ်း ” ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည့်အတွက် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသူများ ကြည့်ရှုရန်မသင့်လျော်ပါ။ ဗီဒီယိုကြည့်ရန် The Brick Cast : Khant Ko Zin , Han Htoo Naing Directed & Edited by ARGA Assistant…
၈ ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီးကို ကျောက်ဆည်မြို့နယ်မှ ဦးအောင်စော ဆွတ်ခူး
၈ ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီးကို ကျောက်ဆည်မြို့နယ်မှ ဦးအောင်စော ဆွတ်ခူး ထီထိုးပြီး ထီတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးတဲ့သူများ အတွက် ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်း ထီပေါက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများ ~~(၁၄) ** ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်စိတ်ဝယ်ထုံ “ဗုဒ္ဓေါ” ဂုဏ်ပွား ကောင်းကျိုးများ ** (၁) သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ရေအိုးတစ်လုံးအား (မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်တွင်ထားရှိရန်သင့်တော်မည့်အရွယ်) ရေအပြည့်ဖြည့်ကာ…. (က) အင်္ဂါနေ့ နံနက်/ည ၆-နရီ ၁၀-မိနစ်…
ပြင်ဦးလွင်က ကျပ်သိန်း (5000) ကံထူးသွားသော ကလေးမလေး
ပြင်ဦးလွင်က ကျပ်သိန်း (5000) ကံထူးသွားသော ကလေးမလေး ထီထိုးပြီး ထီတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးတဲ့သူများ အတွက် ထီပေါက်စေသော နည်းလမ်း ထီပေါက်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများ ~~(၁၄) ** ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်စိတ်ဝယ်ထုံ “ဗုဒ္ဓေါ” ဂုဏ်ပွား ကောင်းကျိုးများ ** (၁) သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ရေအိုးတစ်လုံးအား (မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်တွင်ထားရှိရန်သင့်တော်မည့်အရွယ်) ရေအပြည့်ဖြည့်ကာ…. (က) အင်္ဂါနေ့ နံနက်/ည ၆-နရီ ၁၀-မိနစ် မှ၇-နာရီ…
ထိုင်းတွင် ဂူသွင်း သဂြုင်္ိဟ်ထားသော မြန်မာအမျိုးသမီး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်ဖော်၍ စစ်ဆေးမည်
ထိုင်းနိုင်ငံ လပ်ဘူရီမြို့တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာနှင့် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဂူသွင်းသဂြုင်္ိဟ်ထားသော မြန်မာအမျိုးသမီး ရုပ်အလောင်း ကို ထိုင်း အထူးရဲတပ်ဖွဲ့က တူးဖော်၍ ပြန်လည် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နေ သည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (AAC) က ပြောသည်။ လပ်ဘူရီမြို့နယ် ဘန်ပုံနယ်မြေရှိ ထိုင်းလူမျိုးတဦး၏ နေအိမ်တွင် အိမ်အကူအလုပ်နေသည့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်…
၇ ရက် သားသမီးမျာအတွက် ၁.၁၁.၂၀၁၇ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇ အထိ တစ်လစာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
၇ ရက် သားသမီးမျာအတွက် ၁.၁၁.၂၀၁၇ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇ အထိ တစ်လစာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် သူတစ်ပါးငွေများကိုင်ခြင်းအာမခံခြင်းများမလုပ်ပါနှင့်ပြသာနာတက်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင်အထူးကံကောင်းကျိုးပြုလာမည်။ အချစ်ရေး၌စန်းပွင့်ပြီးလူငယ်လူရွှယ်များအနေဖြင့် နှလုံးသားရေးရာများတွင် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့် စိတ်မောရတတ်သည်။ ပညာရေး၌ ရှေ့ပိုင်းကာလတွင် မရောင်မလည်ဖြစ်နေတတ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှ အဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်ကိန်းရှိသည်။ ကျန်းမာရေးမှာမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတတ်မည်။ လူမှုရေး၌ အထူးလူချစ်လူင်ပေါ်များမည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်စေကာမူ တပည့်လက်သားအလုပ်သမားတို့နှင့် အဆင်ပြေတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်၏။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ဆုံးရှုံးထားသောငွေများပြန်လည် အဆင်ပြေလာမည်။ ကား…
Previous 1 … 256 257 258 … 357 Next